Obstetricians Futhi gynecologists Job Description / Duty Isifanekiso Futhi Izindima – JobDescriptionSample.org
Ikhaya / Ukukhangisa / Obstetricians Futhi gynecologists Job Description / Duty Isifanekiso Futhi Izindima
superadmin Juni 28, 2016 Ukukhangisa Shiya amazwana 1,721 Ukubukwa
Odokotela abanikeza ukunakekelwa kwezempilo izikweletu exhumene wetemisebenti nobe kwabakhulelwe labo ukuthola, ukuphatha, kanye nokusiza ekuvimbeleni izimo emakhosazaneni, ikakhulukazi labo ezinomthelela inqubo ukukhiqizwa kabusha. Ayikwazanga futhi unikeze ukunakekelwa ngezokwelashwa jikelele ukuze abesifazane.
Nakekela kanye nekheli izintokazi.
Reveal amasu futhi nixoxe imiphumela yokuhlolwa noma zokwelapha inikezwe usebenzisa amaklayenti.
Yiphathe izifo kwezitho njengabesifazane.
Gada peopleA izifo kanye ngcono futhi sihlaziye izixazululo njengoba kudingeka.
ukuhlinzwa engeziwe njengoba noma ukufeza izingxenye cesarean ezidingekayo ukusekela peopleWI ezempilo ukukhiqiza izingane ngokuphepha.
Linqume noma unikele ikhambi, imithi, kanye ukunakekelwa ngokukhethekile yezokwelapha okungukuthi nezinye ukwelapha noma ukunciphisa isimo, ukutheleleka, noma ukulimala.
Hlola ulwazi hlola-up, izindaba, hlola izinzuzo, noma amadokhumenti ukuhlaziya isimo isiguli.
ukuqoqa, ifayela, futhi Silondoloze idatha ngabanye, ezifana imilando yezokwelapha, izindaba, futhi ukuhlolwa imiphumela.
Qondisa iziguli kanye nabantu emphakathini mayelana ekuvimbeleni izifo, nomsebenzi, inhlanzeko.
Landisa ogulayo Uchwepheshe okungukuthi ezinye noma uchwepheshe kwezempilo lapho kudingeka.
Hlola noma ukuphakela odokotela ezengeziwe nezixazululo ngokuvakashela.
izenzo ezisheshayo nokuxhumanisa odokotela , abafundi, abasizi, ochwepheshe, abahlengikazi, kanye nabanye abasebenzi bezempilo.
isu, isicelo, noma liphathe izicelo zezempilo e corporations, noma omakhelwane mayelana khambi futhi unamathele kugwenywe izingozi noma izifo.
Lungisa Izindaba Ezintsha neliqinile imibiko abasebenzi kobufakazi, ukulethwa, befa, futhi ukutheleleka izibalo, noma mhlawumbe idumela wezokwelapha komuntu.
Yenza ucwaningo ukukhiqiza noma uhlole ukwelashwa, izidakamizwa, noma amasu ukuvimbela noma ukulawula yesifo noma ukulimala.
Ukufunda Isifundo sokuqondisisa-Sivisiso izigaba nokuqukethwe okudalwe emsebenzini amaphepha ezihambelana.
Active Ukulalela-Ukudayisela ukuqaphela lonke ngalokho abanye abantu bathini, ukuthola isikhathi namandla ukuqaphela izinto idalwa, obuza imibuzo njengoba ofanele, hhayi kokuphazamisa at izikhathi ezingafanele.
Ukukhiqiza-Ephepheni hhayi njengokungabafanele nezidingo emakethe bexoxa kahle.
Ukuxhumana-Ukukhuluma nabanye ngedatha kwamandla.
Mathematics, i-maths ukuxazulula izinkinga.
izixazululo Technology-Sisebenzisa futhi izimiso zesayensi ukuxazulula izinkinga.
Ecabanga ukuthi ukucabanga ezibucayi-Sisebenzisa futhi isizathu ukuzibona amaphutha bese ebheka namakhono ongakhetha ukukhetha, imibono noma izindlela nobunzima.
Active kokubili samanje futhi ezingaba izinkinga kanye izinqumo Learning-Ukwazi nemithelela ulwazi olusha ngokuphathelene.
Ukufunda Izindlela-Ukukhetha futhi sisebenzisa educationANDtutorial izindlela kanye nezinqubo buyafaneleka isimo othize lapho ukufunda noma izinkinga nemfundiso ziyazithokozela.
Ukuqapha-Ukwengamela / ukusebenza Inquma sabantu ezengeziwe, ngokwakho, noma izinkampani ukwenza intuthuko noma wenza izenzo zokulungisa.
Komphakathi Perceptiveness-Ngokuhlale bekhumbula abanye’ ukuthambekela kungani uphendule njengoba benza nolwazi.
Ukuxhumanisa-Ukulungisa izenzo maqondana abanye’ ukuziphatha.
Azithenge-ukuncenga abanye ukushintsha imikhuba noma amakhanda abo.
YezokuLamula-Ukunikeza abanye ndawonye futhi ngifuna ukuvumelanisa okwahlukile.
Ukusiza-Ukuqeqesha abanye howto sithuthe.
Izikhungo Orientation-Ngezenzo ngifuna amasu ukusiza abantu.
Advanced Problemsolving Ukuthola izinto ezibukhuni nokwenza ucwaninga amaqiniso exhumene ahlolisise abuye ukwakha izinqumo kanye nokuqalisa ongakhetha.
Operations Research-Ukutadisha okuthengiswayo izimfanelo futhi kudinga ukukhiqiza isitayela.
Ubuchwepheshe Design okwakha noma amathuluzi bakubheka nobuchwepheshe ukusiza izidingo umuntu.
Isisetshenziswa Ukukhethwa-Ukunquma amathuluzi uhlobo imishini kwakudingeka sina ezokhipha i-career.
onobuhle Isitolimende-Ifaka, amadivayisi, izintambo, noma amaphakheji ukugcwalisa specs.
izinhlelo Development-Publishing ikhompyutha mayelana ngezinhloso ezimbalwa.
Ukusebenza Tracking-Ukuqaphela ukuhlolwa, namasumpa, noma izimpawu ezahlukene ukuze uqiniseke kukhona umshini enza ngokufanele.
Opharetjhini imisebenzi Yiphathe-Ukusingatha amasistimu noma imikhiqizo.
Isondlo-Ukwenza yesondlo sekuyinsakavukela kugiye kokunquma uma futhi yeka ukuthi luhlobo luni yesondlo iyoba ezidingekayo.
Ukuxazulula-Inquma zezici ezibangela amaphutha ukuthi tisebenta nokukhetha lokho isiqondiso ukuya ngale.
Elungisa-belungisa izinhlelo noma imikhiqizo usebenzisa imishini ukuthi oyifunayo.
Quality-Control Examination-Ukwenza ukuhlolwa nokuhlolisisa imikhiqizo, abahlinzeki, noma izinqubo ukuba yahlulele esihle noma ukusebenza.
Buka futhi izinqumo-Ukucabanga izinzuzo amanani jikelele izinyathelo ezivumelana ezingaba ukukhetha omunye ezifanele kakhulu.
Ukuhlaziywa Ukuthola ukuthi luhlobo luni uhlelo okufanele asebenze futhi indlela ukuthuthukiswa imisebenzi, izimo, kanye imvelo kungase kuwuthinte izinzuzo.
Systems Ukuhlolwa-Inquma izinyathelo noma izinkomba ukusebenza uhlelo kanye ngokuhlobene imigomo zedivayisi, olunembile noma ukuziphatha ezidingekayo ukuze uthuthukise ukusebenza.
Isikhathi-Management-nokusingatha abanye’ isikhathi kanye oneis isikhashana siqu.
Ukuphathwa lwezezimali Resources-Ukunquma indlela imali maduze ingasetshenziswa ukuba umsebenzi owenziwa, futhi yokuthengisa lezi izikweletu.
Ukuphathwa Izinto Resources-Ukuthola nokugcina ukuze asetshenziswe ngendlela efanele imikhiqizo, izikhungo, futhi izingxenye waba isidingo ukwenza umsebenzi othile.
Ukugada Abasebenzi Resources-Ukusungula, kushukumisa, futhi eqondisa abantu ngesikhathi enza, ukuhlukanisa abantu okungcono kakhulu umsebenzi.
Ukuqeqeshwa Ukufaneleka Ulwazi Imfuneko
Ngaphezu kwe 4 iminyaka, kuya ku 6 iminyaka futhi kubandakanya,
Umsebenzi Ubuholi Amakhono Okudingeka
Imphumelelo / Umzamo – 96.18%
Matter Abanye – 96.80%
Positioning Komphakathi – 87.01%
Ukuzithiba – 96.39%
ingcindezi IThreshold ungayifaka – 97.20%
ukungaguquguquki – 99.20%
Ukuqaphela Umniningwane – 99.20%
Yokuziphatha – %
Thuthuka – 87.36%
Ukucabanga – 91.53%